Abantu Bokuqala Ukufuna Inyaniso | ILizwe laseGeorgia: 1924-1990
Bahlanganisana ngakunxweme olukufutshane neSokhumi, ngo-1989
EKUQALENI koo-1920, aBafundi BeBhayibhile benza umgudu ukuze bafundise abantu baseGeorgia inyaniso. Ngo-1924, kwavulwa iofisi eBeirut, eLebanon, ukuze kwalathiswe umsebenzi wokushumayela kulo mmandla owawuquka iArmenia, iGeorgia, iSiriya neTurkey.
Nangona imbewu yenyaniso yatyalwayo eGeorgia ngelo xesha, akuzange kubekho miphumo icacileyo. (Mat. 13:33) Kodwa ekuhambeni kwexesha, isigidimi soBukumkani sasasazeka saza sabangela utshintsho olukhulu kubomi babantu baseGeorgia.
Xa kwaqhambuka imfazwe yehlabathi yesibini, uVaso Kveniashvili wayengumfanyana nje oneminyaka eyi-14. Ekubeni iGeorgia yayiyinxalenye yamazwe abumba iSoviet Union, utata wakhe wathunyelwa emkhosini. Ngelo xesha, umama kaVaso wayeswelekile. UVaso owayengoyena mdala, waqalisa ubusela ukuze azixhase yena kunye nabantwana bakowabo.
UVaso wangenela iqela lemigulukudu waza waba sisaphuli mthetho. Uthi, “Ndandisithi izaphuli mthetho zinobulungisa ngaphezu korhulumente nabantu.” Kodwa wakhawuleza waqonda ukuba ukhangela into engaphaya kwaleyo anokuyifumana ebantwini. Uthi, “Ndandifuna kwenziwe ubulungisa.”
UVaso Kveniashvili ngo-1964, emva kokukhululwa kwakhe entolongweni
UVaso wade wabanjwa waza wavalelwa kwinkampu yokusebenza nzima eSiberia. Apho wadibana nelinye iNgqina LikaYehova elalivalelwe ngenxa yokholo lwalo. Uthi: “Ndade ndayifumana le nto bendiyifuna. Sasingenazo iincwadi, kodwa ndazama kangangoko ukufunda koko lalindixelela kona.”
Xa wakhululwayo ngo-1964, wabuyela eGeorgia waza wakhangela amaNgqina KaYehova. Ngoxa wayesakhangela, wayebhalelana nelaa Ngqina ngeleta. Okubuhlungu kukuba umhlobo wakhe wasweleka, waza walahlekana nabantu bakaThixo. Kwafuneka alinde phantse iminyaka engamashumi amabini ngaphambi kokuba afumane amaNgqina kwakhona. Siza kuphinda sive okungakumbi ngaye.
Ubunzima Obajika Baba Yintsikelelo
Ukuvalelwa kukaValentina Miminoshvili, ibhinqa eliselula laseGeorgia, kwaba yintsikelelo enkulu. Apho wadibana namaNgqina KaYehova okokuqala. Eyona nto yamchukumisa kakhulu lukholo lwawo olungagungqiyo. Wachukunyiswa nazizinto ababemfundisa zona eziphuma eBhayibhileni.
Xa wagodukayo emva kwemfazwe, uValentina waxelela abanye ngezinto azifundileyo. Kodwa wabonwa ngabasemagunyeni, baza bamvalela iminyaka elishumi kwinkampu yokusebenza nzima eRashiya. Apho waphinda wadibana namaNgqina KaYehova, waza kamva wabhaptizwa.
Emva kokuba ekhululwe enkampini ngo-1967, waya entshona Georgia, waqalisa apho ebeyeke khona nomsebenzi wokushumayela nangona wayechul’ ukunyathela. Wayengazi ukuba uza kuba yimpendulo yomthandazo osuka entliziyweni.
UYehova Wayiphendula Imithandazo Yakhe
Ngo-1962, uDade Antonina Gudadze wasuka eSiberia waza waya eGeorgia xa umyeni wakhe wagqiba ekubeni abuyele elizweni lakowabo. UAntonina owayengowaseSiberia, wayifumana inyaniso kumaNgqina awayeselubhacweni apho. Ekubeni wayehlala eKhashuri, isixeko esisempuma Georgia, wazibona ahlukanisiwe namanye amaKristu.
Intsapho yakwaGudadze ngeminyaka yoo-1960
UAntonina uchaza indlela uYehova awayiphendula ngayo imithandazo yakhe: “Ngenye imini ndafumana ipasile evela kumama eSiberia, ibe ngaphakathi kuyo kwakufihlwe iincwadi zeBhayibhile. Ndaqhubeka ndizifumana ngaloo ndlela iincwadi ezisekelwe eBhayibhileni kangangeminyaka emithandathu eyalandelayo. Sihlandlo ngasinye ndandimbulela uYehova ngokhokelo, ukhuthazo nokundikhathalela kwakhe.”
Noko ke, uAntonina wayengenabani. Uthi: “Ndaqhubeka ndimcela uYehova ukuba andidibanise nabazalwana noodade. Ngenye imini kwafika amabhinqa amabini kwivenkile endandisebenza kuyo. Bandibuza, ‘UnguAntonina?’ Ndababona kwasebusweni ukuba aba ngoodade. Sangana saza salila.”
Omnye wabo yayinguValentina Miminoshvili. Wavuya kakhulu uAntonina akufumanisa ukuba iintlanganiso zaziqhutyelwa entshona Georgia! Wayesiya kube kanye ngenyanga kuzo, nangona zazikumgama weekhilomitha eziyi-300.
Imbewu Yenyaniso Yakhula Entshona Georgia
Ngeminyaka yoo-1960, amanye amaNgqina awayetshutshiswa ngabasemagunyeni afudukela kwezinye iindawo ezazingcono. UVladimir Gladyuk, umzalwana owayekhuthele kwaye edlamkile wayengomnye wabo. Ngo-1969, wemka eUkraine waya kwisixeko saseZugdidi, entshona Georgia.
ULyuba noVladimir Gladyuk
Ekuqaleni, abo babefudukele eGeorgia babeziqhuba ngesiRashiya iintlanganiso. Noko ke, njengoko abantu baseGeorgia babesiya rhoqo kwiintlanganiso, kwenziwa amalungiselelo okuba ziqhutywe ngesiGeorgia. Umsebenzi wokwenza abafundi waba nempumelelo kangangokuba ngoAgasti 1970, kwabhaptizwa abantu abayi-12.
Ngentwasa hlobo yango-1972, uVladimir kunye nentsapho yakhe baphinda baya ngasentshona, kwisixeko saseSokhumi kunxweme loLwandle Olumnyama. UVladimir uthi: “Sasiluva ukholo lwethu ukuba lomelele ibe sambulela uYehova ngokusisikelela. Ibandla lalapho lakhawuleza lakhula.” Ngaloo ntwasa hlobo iSikhumbuzo sokuqala sasiseSokhumi, ibe kweza abantu abayi-45.
“Ndamamelisisa Ibe Kwandivuyisa Oko Ndakuvayo”
UBabutsa Jejelava, oneminyaka engaphezu kweyi-90, waba ngomnye wabokuqala ukufumana inyaniso eSokhumi ngo-1973. Uthi: “Ngenye imini, ndabona amabhinqa amane exoxa. Amabini ayengonoongendi, kamva ndafumanisa ukuba amanye ngamaNgqina KaYehova.” Omnye kwabo dade yayingumfazi kaVladimir Gladyuk, uLyuba omnye inguItta Sudarenko, uvulindlela okhutheleyo waseUkraine.
UBabutsa Jejelava ngo-1979 nango-2016
UBabutsa ukhumbula indlela awavakalelwa ngayo xa weva le ncoko, “Ndamamelisisa ibe kwandivuyisa oko ndakuvayo.” Xa weva ukuba uThixo unegama, wakhawuleza wangenelela kule ncoko waza wabacela ukuba bambonise eBhayibhileni. Wabuza imibuzo emininzi kangangokuba incoko yathatha iiyure ezintathu.
UBabutsa wayenexhala lokuba akazokuphinda awabone la amaNgqina, ngoko wawabuza, “Niza kuhamba, nindishiye apha?”
Aphendula: “Hayi, asizukushiya. Siza kubuya ngoMgqibelo.”
Afika nyhani ngoMgqibelo, waza uBabutsa wavuya kakhulu! Kwaqaliswa isifundo ngoko nangoko. Ukuphela kwesifundo, uBabutsa wafuna ukuqinisekisa kwakhona ukuba akazokuphulukana nabantu bakaThixo. Wathi: ‘Ndibafumene aba abantu. Ngoku kufuneka ndiqiniseke andiphulukani nabo.’
UBabutsa weza necebo. Uthi: “Ndandisazi ukuba uLyuba utshatile, ngoko ndabuza uItta ukuba utshatile na naye. Wathi akanamyeni. Ndathi: ‘Yizokuhlala nam! Ndineebhedi ezimbini, nesibane phakathi kwazo. Sinokubeka iBhayibhile phantsi kwaso size siyifunde nasebusuku!’” UItta wasamkela eso sicelo waza waya kuhlala noBabutsa.
Ekhumbula elo xesha, uBabutsa uthi: “Ngamanye amaxesha ndandingalali ebusuku ndicamngca ngoko ndikufundileyo, kuze kuthi qatha umbuzo. Ndandiye ndivuse uItta, ndithi: ‘Itta, thatha iBhayibhile yakho, ndinombuzo!’ Esosula amehlo, wayeye athi, ‘Kulungile.’ Wayeye ayivule aze andibonise impendulo.” Kwiintsuku nje ezintathu efikile uItta, uBabutsa wayesele eshumayela!
UBabutsa wayenomhlobo osondeleyo, uNatela Chargeishvili. Uthi: “Ndandicinga ukuba ubutyebi babuza kumenza angayamkeli inyaniso, kodwa ndandingachananga. Wayamkela inyaniso kwakwincoko nje yethu yokuqala.” Kungekudala, bobabini babeshumayela kubahlobo babo, abantu ababesebenza nabo, nakubamelwane.